Ugu yaraan afar qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay xarun degmo oo kutaala Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan afar qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay xarun degmo oo kutaala Muqdisho
May 14, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen ciidamada booliiska.
Qaraxa ayaa maanta oo Talaado ah lala beegsaday xarunta degmada Warta-nabada oo horey loo oran jiray War-dhiiglay, sida ay sheegtay Sakiya Xuseen oo ah taliye ku xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliya.
“Abaaro 11-kii subaxnimo maanta ayaa baabuur noociisa yahay Toyota Noah isku qarxiyay degmada Warta-nabada halkaas ay ku dhinteen 4 qof sidoo kalena ku dhaawacmeen 9 qof intaan xaqiijinay.” Sidaa waxaa tiri Sakiya Xuseen.
Qiiqa ka dhashay qaraxa oo u ekaaday daruuraha ayaa la arki karayay isaga oo cirka isku shareeray.
Qiix cirka isku shareeray qaraxa kadib. [Isha sawirka: Twitter]
Qaraxan ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee gaari walxaha qarxa laga soo buuxshay oo ka dhacay Muqdisho intii lagu guda jiray bishaan barakeysan ee Ramadaan, markaas oo maleeshiyada Al-Shabaab ay kordhiyaan weeraradooda.
September 2, 2019 Ciidamada ammaanka oo ka hortagay gaari qarax gudaha Muqdisho
January 18, 2019 Al-Shabaab oo caaruur ka badan 100 ka afduubatay gobolka Bakool
April 24, 2019 Qaraxa wadada dhinaceeda la dhigo oo lala beegsaday gaariga guddoomiyaha gobolka Bari